pandora July 30, 2010 at 11:50 PM
စာလေးက လှတယ်။ ကဗျာလေးကလည်း လှပါတယ်။ ကဗျာဆရာကလည်း လှမှာပါပဲ။း)
ဇွန်မိုးစက် July 31, 2010 at 12:15 AM
ကုန်ဆုံးလွယ်တဲ့ အချိန်လေးတွေကို ပြန်လည်တမ်းတ မြင်ယောင်ရင်း စာရောကဗျာပါ ခံစားဖတ်သွားပါတယ်။
ပျော်ရွှင်သော အားလပ်ရက်တွေ ဖြစ်ပါစေ မမ။း)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) July 31, 2010 at 3:34 AM
ကာရံရှာမတွေ့လို့များ အဝေးဆုံးကို ထွက်သွားလေသလားနော်...
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်လာချိန်မှာတော့ လှပတဲ့ ကဗျာအဆုံးသတ်ကလေးကို ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ
;) အို.. ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ..
အပြုံးပန်း July 31, 2010 at 8:32 AM
ဝေးဝေးကသာ နှလုံးသားချင်းလားလည်တာလည်း လှပတဲ့ အချစ်တခုပါပဲ၊
Hmoo July 31, 2010 at 12:19 PM
ဖြူ July 31, 2010 at 12:35 PM
ဒါမျိုး မဖတ်ရတာ ကြာပေါ့...
rose of sharon July 31, 2010 at 3:10 PM
ဖတ်လို့ကောင်းလို့ဖတ်ရင်းနဲ့ ငိုချင်လာတယ်... ဘာကိုမှန်းမသိ လွမ်းမိလိုက်ရသေးတယ်...
Anonymous July 31, 2010 at 3:38 PM
အတူတူဆိုရင် ကို သွားဖတ်ပြီးပါပြီ...
တပိုင်းတစ ကဗျာလေး အဆုံးသတ်ပြီးရင် အစ အဆုံး ဖတ်ချင်ပါတယ်...
blueskyforest July 31, 2010 at 3:52 PM
သက်ဝေ အချစ်ဝတ္တုရေးစားလို့ရပြီ။ ၀င်ငွေကောင်း ဆိုပဲ။ ထုတ်ဝေသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးရမလား။း)
TNS July 31, 2010 at 4:05 PM
မိုးငွေ့...... July 31, 2010 at 4:12 PM
မသက်ဝေ ကဗျာလေးလှတယ် အရေးအသားကလဲ ကောင်းပါ့ နောက်ထပ်ဒီလို စာလှလှလေးကို မျှော်လင့်နေပါတယ်... ရိုမန့်လေးပေါ့ ...
ညီမလေး July 31, 2010 at 7:22 PM
မမသက်ဝေက ဒါမျိုးတွေလဲ ရတယ်လားတဲ့ ..း)) မိုက်တယ် .. စကားလုံးလေးတွေလဲ လှတယ် ။။
နေ၀သန် July 31, 2010 at 8:30 PM
စကားလုံးတွေ သိပ်လှတယ်.... အက်ဆေးလေးလိုပုံစံလေးပေါက်နေပေမယ့် ကဗျာကို ခံစားရေးဖွဲ့တာလား... အကြောင်းအရာကိုတော့ အပွင့်လင်းဆုံးဝန်ခံရရင် သိပ်နားမလည်ဘူး....
Anonymous July 31, 2010 at 11:35 PM
လွမ်းနေတုန်း ဖတ်ရတာ ငိုချင်တယ်။း( ကဗျာဆရာ ဘယ်သူလဲ သိချင်ပါဘိ။
TURN-ON-IDEAS July 31, 2010 at 11:42 PM
စာဖတ်သူ August 2, 2010 at 12:32 PM
အဝေးဆုံး ဝေးရမယ့် အကြောင်းတွေ